Qaabka PCB, PCB nuqul, PCB rogaal celis
PCB clone, samaynta PCB, farsamaynta SMT,
Daabacan Golaha Wareegga Wareegga iyo wax soo saarka ballaaran
Koobiga PCB iyo PCB clone
Dildilaaca IC iyo Furitaanka Koodhka
Barnaamijka IC MCU, Unugga Gubashada
Chip decryption tayo adag talaabo talaabo hal-abuurnimo
Marka la eego shirkadda jajabinta jajabka, Shiinaha waxaa loo yaqaan "warshada adduunka", laakiin uma maleyn karto inay sidoo kale tahay awood wax soo saar leh. Sababo la xiriira xaaladaha gaarka ah ee qaranka, Shiinuhu wuxuu qaaday waddo kobac ballaaran oo lagu guuleysto tiro ahaan in ka badan 30 sano, waana daciif ...
Awoodda hal-abuurka curinta ee Chip decryption waxay qaadataa fursadda ay ku kobciso hal-abuurnimada sare
Sababtoo ah dad badan ayaa isfaham la'aan ku saabsan decryption chip, hadda oo leh horumarinta joogtada ah iyo qoto-dheeraynta warshadaha decryption, fikradda jajabinta jajabinta ayaa la kordhiyay si ballaaran, iyo ku celcelinta chip-ka fudud iyo cloning waa laga tagay. Inkastoo chip decryption...
Qiime noocee ah ayay koobiyeyntu u keentaa isticmaalayaasha?
Qof baa mar sameeyay mala-awaal sidan oo kale ah: haddii ay laba sano ku qaadato cilmi-baadhista kombuyuutarrada wax-ku-qorka ah, oo ay qaadato laba sano si aan u galno cilmi-baarista ka dib cilmi-baarista dibadda, markaa waxaan iibin karnaa oo keliya buug-yaraha ajnabiga ah labadan sano. Sidan, ma aha oo kaliya buugaagteena xusuus qorka ah ayaa ka soo daahay afar sano ...
Sida loo doorto guddiga saxda ah marka la koobiyeynayo PCB
Sidee si sax ah loo doortaa looxyada PCB marka la koobiyeynayo looxyada PCB? Marka la dooranayo guddiyada PCB, waa in aan dheellitirnaa inta u dhexeysa buuxinta shuruudaha naqshadeynta, wax soo saarka ballaaran iyo qiimaha. Shuruudaha naqshadeynta waxaa ka mid ah qaybaha korontada iyo farsamada. Dhibaatada alaabtan badanaa waa muhiim marka la naqshadeynayo ver...
Ma samayn karno la'aantiis alaab elegtaroonig ah, mana samayn karno la'aantii guddiga koobiga ee PCB
Hadda weydii warshadaha leh qaddarinta ugu dhakhsaha badan. Waa warshadaha elektarooniga ah. Waxaan aaminsanahay in tignoolajiyada elektiroonigga ah aan la baabi'in doonin sannado badan oo soo socda. Si kastaba ha noqotee, warshadaha elektiroonigga ah ee maanta waa kuwo karti badan. Haddii aad rabto in aad dariiq ka sameyso darajooyinka ganacsiga, waxaad...
Farsamada sare ma seegi karto sii wadida koobiynta PCB waa maxay tignoolajiyada koobiga ee PCB?
Waxa loogu yeero PCB nuqul ka mid ah cloning, oo sidoo kale loo yaqaan nuqulka guddiga wareegga, waxaa loola jeedaa falanqaynta gadaale ee guddiga wareegga iyadoo la adeegsanayo habka farsamada R & D ee dhismaha alaabada elektiroonigga ah ee jira iyo guddiyada wareegga, iyo 1: 1 dib u soo celinta Faylasha PCB, faylalka biilka alaabta (BOM), ...
La wadaag 5 hab ee PCB koobiyeynta iyo kala dirida wareegyada isku dhafan
Inta lagu guda jiro koobiynta PCB, waxaa lagama maarmaan ah in la kala qaybiyo guddiga wareegga, meesha laga saaro wareegga isku dhafan iyo qaybaha kale, samee liiska BOM, oo la sawiro oo koobiyeeyo guddiga PCB ee kala qaybsan. Sidaa darteed, habkan, sidoo kale waa mawduuc muhiim ah in si sax ah loo kala saaro wareegga isku dhafan o...
PCB laalaabida xirfadaha naqshadeynta PCB
1. Diyaarinta ka hor naqshadeynta ka hor naqshadeynta, waa in aan marka hore ka fekernaa oo aan go'aaminaa istaraatiijiyadda naqshadeynta, si loo hago xulashada qaybaha, xulashada habka iyo xakamaynta kharashka wax soo saarka guddiga wareegga. Marka la eego Si, waxaa lagama maarmaan ah in horay loo sameeyo cilmi-baaris si loo sameeyo qorsheyn ama desi...
U fiirso EMI iyo emc-1 ee naqshadaynta PCB
Shuruudaha ka hortagga faragelinta waa in si buuxda loo tixgaliyaa oo la buuxiyaa. Waxa jira saddex walxood oo aasaasiga ah ee faragelinta: (1) Isha faragelintu waxa ay tilmaamaysaa curiyaha, qalabka ama calaamadaynta faragelinta, taas oo lagu qeexay luqadda xisaabta sida soo socota: Du / DT, di / DT Dhul weyn oo T...
Sahaminta ayaa ka dhigaysa fur-furan si habsami leh
Tignoolajiyada Chine ee Chine waa dhaawac adag. Waxa ay guulo fiican ka soo hoysay qaybaha dhexe iyo kuwa hoose ee wershadaha chip-ka, laakiin had iyo jeer waa adkeysi la'aanta meelaha sare ee warshadaha chip-ka, sidaas darteed way adagtahay in la fuulo meesha ugu sarreysa. Maxaa hortaagan horumarinta tignoolajiyada chip? Th...
Decryption MCU waxay caqabad ku tahay kor u kaca amniga elektiroonigga ah
Marka la eego hagaajinta heerka nolosha dadka, bay'ada badbaadada iyo raaxada leh ee guriga ayaa soo jiidatay dareen dheeraad ah iyo in ka badan. Marka lagu daro xoojinta xawliga casriyeynta, dhammaan noocyada kala duwan ee arrimaha mashquulku waxay horseedaan waqti yar oo lagu daryeelo qoyska, iyo fikradda dadka ee ho...
Ma ogtahay inaadan noolaan karin la'aanteed - guddiga koobiga PCB?
Marka ay timaado koobiynta PCB, dadka aan fahmin waxay marka hore ka fikiri doonaan inay ka tirsan tahay baaxadda xatooyada? Dhab ahaantii, illaa iyo inta macnaha Shiinaha ee ereyga koowaad ee koobiyeynta PCB ay khusayso, waxay dadka siin kartaa faham la'aan in warshadaha koobiynta PCB lafteeda ...
Cinwaanka:Qolka 302, RongXing Building, FuHao Garden, 168# Road Bulong, Bantian Street, Degmada Longgang, Shenzhen City, Guangdong, Shiinaha.
fakis:+86 755 8304 5278
Shenzhen Sichi Technology Co.,LTDQaanuunka Arrimaha Khaaska ahShuruudaha iyo Shuruudaha